Ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-aga n'ihu na-eto eto na Spain | Bezzia
Ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-aga n'ihu na-etolite na Spain
Maria onyekwere | 22/06/2022 10:00 | si ebi ndụ
Nbudata ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị izugbe ruru 32% na mmalite nke afọ 2022. Ajọ mbunobi banyere ibe ndị a ebelatala ma ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụ ngwa ndị a dị ka ụzọ ọzọ isi zute mmadụ.
Ọtụtụ n'ime ibe ndị a na-arụ ọrụ n'okpuru ike ngwa ngwa nke ọ ga-ezuru iji were mkpịsị aka gị gafee ihuenyo site n'aka ekpe gaa n'aka nri ịhọrọ oge ọzọ. Ndị ọzọ nwere ụda ahụ iru ala karịa, họrọ profaịlụ ndị ekwenyesiri ike na otu mmadụ na-azaghachi n'azụ ihuenyo.
Ị maara na anyị bụ ndị Spen nke atọ na ọkwa ojiji nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị portals na ngwa? Naanị United States na Brazil karịrị anyị na ọkwa, nke na-etinye anyị n'isi Europe n'iji ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Mana, kedu ihe ngwa ndị a dị na nke kacha ewu ewu na Spain?
1 Maka ihe niile
2 Kacha ewu ewu na Spain
El Otu ọnụ ọgụgụ mmadụ na-arị elu, nke, dị ka data sitere na National Institute of Statistics si kwuo, esila na 36% na 2019 ruo 40% na 2021, ma na-erigbu ya site na ngwa ahịa na-achọ mgbe niile nke niche ọgbọ nke ọ nwere ike inye ọrụ ya.
Ma ọ bụghị naanị site na niches ọgbọ, ngwa ndị a na-ejikwa ụdị ndị ọzọ niches dị ka mmasị, agbụrụ na ọbụna okpukpe. Taa enwere ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị maka onye ọ bụla, ọ bụ ezie na mgbe ị na-ahapụ ihe kachasị ewu ewu anyị nwere ike ịhụ enweghị ndị ọrụ.
Dị ka anyị kwuworo, ọtụtụ n'ime ngwa ndị a na-arụ ọrụ n'okpuru accelerated dynamics nke ọ ga-ezuru swipe mkpịsị aka gị n'ofe ihuenyo ịhọrọ oge ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-ekwu maka ngwa dị ka Tinder ma ọ bụ Bumble, nke ọ bụ nwanyị ga-eme nzọụkwụ mbụ.
N'aka nke ọzọ, ụdị apss ọzọ na-eme ka ọ bụrụ ebe ntụrụndụ karịa na enyi. A na-achọkarị ihe ndị a na niche a kapịrị ọnụ, dị ka ọ dị, dịka ọmụmaatụ, nke Ourtime, lekwasịrị anya na ndị gaferela afọ 50. ebe a nhọrọ nke ndị na-aga ime a na-enye ya dị ka mmekọrita si dị ka ọ zara ajụjụ na-agwụ ike ma kwadoro profaịlụ niile, ya bụ na ngwa ahụ na-eme ka ọ bụrụ na onye ahụ na-anọchite anya profaịlụ dijitalụ kwekọrọ na onye nọ n'ụwa n'ezie.
Enwere apss nke ndị ọrụ na-achọkarị maka nnọkọ nkịtị ma ọ bụ mmekọahụ na ndị ọzọ na-ebute mmekọrịta. Kacha ewu ewu, Otú ọ dị, zaghachi na profaịlụ ndị a niile, si otú ahụ na-agụnye ọtụtụ ndị ọrụ dị iche iche.
Kacha ewu ewu na Spain
Edarling na Meetic Ha ka bụ ọnụ ụzọ mbata kacha eleta na Spen. Abụọ na-dabere na matchmaking ka aro ndị mmekọ, na-enyere gị aka ịhụ psychologically metụtara na dakọtara ndị mmadụ. Eji m n'aka na ị ga-amata okwu nke mbụ: maka ịchọ ndị na-alụbeghị di.
Nke abụọ, Meetic, bụ nke Match Group na-ejikwa ngwa dị ka Tinder, Hinge, Plenty of Fish, OK Cupid, Ourtime or Match. N'etiti ndị a Tinder bụ nke kacha ewu ewu, ịbụ otu n'ime ngwa 3 kacha ewu ewu na-akpa na mba dị iche iche dị ka US, UK, Germany, France, Spain na Italy.
Dabere na atụmatụ dị iche iche, Match Group nwere ihe karịrị 56% nke nbudata ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị, ndị otu MagicLab sochiri, nke nwere. badoo na badoo, ọzọ n'ime ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị kacha ewu ewu na Spain.
Ọ bụrụ na ịchọrọ izute ndị nwere otu mmasị gị na mpaghara gị, mee enyi ma ọ bụ chọọ mmekọrịta, ngwa ndị a na-akpakọrịta bụ a dijitalụ ọzọ na ndị ọzọ omenala na ihu na ihu ụzọ ime ihe. Gụọ nkọwa ha, debanye aha maka otu abụọ n'ime ha wee gbalịa.
Buru n'uche na izute ndị mmadụ n'ụzọ dị otú a nwere ike na-atụ ụtụ isi. Ọ na-ewe oge iji chọta a priori profaịlụ yiri nke a, nke ọ bụghị nanị na-abanye anyị n'anya ma ihe ha na-agwa. Ọzọkwa, ozugbo a chọtara ha, ọ bụghị mgbe nile ka ha na-enwe otu ihe mgbaru ọsọ anyị nwere. Ọ bụrụ na ebumnobi anyị a kapịrị ọnụ, ọ pụrụ ịkpata nkụda mmụọ ịga n'ihu n'otu usoro ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-aga n'ihu na-etolite na Spain
Isi ọwụwa: ihe ọ bụ, otu esi eji ya na ọtụtụ ndị ọzọ
Ihe ị ga-eme iji kwụsị iche echiche banyere onye mbụ